Misotro zava-pisotro mampivalan-drano vao mifoha.
Ilaina ny manadio ny tsinay matetika mba hialan’ny loto sy ny pozina ao anaty ao. Ireny mantsy no manakana ny fihenan-danja. Vao mifoha dia tsara ny misotro dite na ireny zava-pisotro mampivalan-drano ireny. Manetsika ny taova fivalanan-drano mantsy izany.
Mihinana ody am-bavafo mahasalama
Raha maniry hihena ho azy ao anaty torimaso dia tsara ny mihinana ody am-bavafo. Mitazona ny vavony eny anelanelam-potoana mantsy izany. Amin’izay tsy mihinam-be rehefa tonga ny fotoanan’ny sakafo. Voankazo iray na yaourt iray ohatra no tsara.
Mampihetsi-batana 30 minitra isan’andro
Fampihetseham-batana mahatsemboka no tena tian-kambara eto. Mety ny mihazakazaka, na milomano na mitaingina bisikilety. Ireo mantsy no tena mandoro tavy. Fa ny tena tsara dia ny manao ilay antsoina hoe :“cardio-training” mihitsy. Azonao hatao koa ny manao spaoro karazany 2 mialohan’ ny hatory. Handoro tavy betsaka kokoa ny vatana mandritra ny torimaso amin’izay.
Mampitony rarin-tsaina 30 minitra isa-kariva.
Anisan’ny singa mampatavy ny tsiry mpanentana antsoina hoe :cortisol. Izy io dia tsiry mpanentana havoakan’ny vatana rehefa voan’ny stress na rarin-tsaina. Ilaina araka izany ny mampitony ny rarin-tsaina, indrindra mialoha ny hatory. Mampitony ny fanaovana spaoro alohan’ny hatory. Mihaino hira na mandro amin’ny rano mamay na koa miotra. Atao aloha kely ny fotoana hatoriany.
Mba hahafahan’ny vatana mandevona ny sakafo mialoha ny tena hatoriana dia tsara raha misakafo ora maro mialohan’ ny hatoriana. Amin’izay tsy vavony mbola mibontsina no idirana ao am-pandriana.
Misotro « thé vert ».
Mampadoro tavy koa ny « thé vert ». Misotro 1 kaopy aminy mialoha kely ny hatory. Sady mampitony saina izy no handoro haingana kokoa ireo tavy.
Manao ampy torimaso tsara.
Mandamina ny tsiry mpanentana rehetra ny torimaso indrindra ny leptine, tsiry mpanentana mandrindra ny fahazotoan-komana sy ny metabolisma. Na dia ny fomba fiaina mandritra ny torimaso fotsiny aza dia mety hahavery rano 1 kilao. Tokony hatory adin’ny fito eo isan-kalina raha ny tokony ho izy.